Making A Difference For People With Mental Illness
The ABC's of Funny Words
March 20 Is Now International Day Of Happiness
Justice For Abused Animals "Absolutely Miserable"
absquatulate: to leave or abscond with something.
allegator: one who alleges something.
anencephalous: lackingabrain.
argle-bargle:aloud row or quarrel.
batrachomyomachy: makingamountain out ofamolehill.
billingsgate: lud, raucous profanity.
bloviate: to speak pompously or to brag.
blunderbuss:agun withaflared muzzle oradisorganized form of activity.
borborygm:arumbling noise in the stomach.
boustrophedon:aback and forth pattern.
bowyang:astrap that holds the pants legs in place.
brouhaha: an uproar.
bumbershoot: slang term for an umbrella.
callipygian: having an attractive posterior or nice pair of tight buns.
callithump:anoisy boisterous parade;anoisy mock serenade (made by banging pans and kettles) toanewly married couple
canoodle: to hug and kiss.
cantankerous: testy, grumpy, ill-tempered
collywobbles: butterflies in the stomach.
comeuppance: just reward, just desserts, something that one deserves.
crapulence: discomfort from eating or drinking to excess.
crudivore:: one who eats raw food.
cockalorumavertically-challenged, haughty male.
cockamamie: absurd, foolish, outlandish.
codswallop: balderdash, drivel, gibberishness, nonsense.
collop:aslice of meat orafold of flesh/flab.
Do leavearesponse. It would be great to hear from readers. Thanks!
Posted: 29 Jun 2012 06:54 AM PDT
If Myanmar Military and U Thein Sein's government failed to stop the following APERTHEID Master-Plan on Muslims in Rakhine state, which is already started, the world leaders should request for the urgent UNSC meeting to discuss and rescue the oppressed people.
The following is the direct translation of the The Rakhine Nationalities Development Party RNDP's Party Policy announcement of APERTHOID STYLE Post-Riots relocations.
Bengalis must be segregated and settle them all in the temporary separate places so that the Rakhines and Bengalis would not be able to mix together in the villages and towns in the Rakhine State.
Now read the good article of my friend regarding the above APARTHEID POLICY:
In my point of view, it's yes and it's going down very fast. Moreover, many people ignore to prevent and protect those who are pushing Burma down the drain and it's likely being seen in the arena of Burma politics, many more are consciously or unconscious, directly or indirectly supporting it. Those pundits of politics who always like to point out whether things are politically correct or not are also surprisingly silent. This is notagood omen.
We all know the notorious system of apartheid in South Africa, segregating people based on their ethnicity. Who can't go to which place, can't take which transport, can't go to which school, and can't go into which career and so on. For the good of the country or any society, there's no doubt and no brainer that different society must work together. Apartheid isavery disgusting and inhumane ideology and it has no place in today's world; let's forget about asking for it and propagating it, even accepting that system is extremely horrible.
However, in our country Burma, there now existsapolitical party that openly demands this system of apartheid and segregation. For2days waiting for any voice from any political leader or any ethnic leader, or any religious leader or any human right activist or any governmental or non-governmental organization, but in vain, there's none. Nobody voice up this isadisgusting, horrible and sicken, atrocious and terrible thing. So the question comes is Burma going down in the drain. (Not to those who do not know the press release of RNDP yet.)
On RNDP's press release 04/2012 dated 2012 May 25, sending back the illegal immigrants to their original country is not wrong and it's acceptable. But regarding 6(b), instead of "taking legal actions against those criminals and lawbreakers, and working out to reconciliation and peaceful co-existence of all citizens", the RNDP demands to segregate the Arakanese Buddhist and other Muslims (mostly Bengali descents) by separating the Muslims away from their places. Those Burmese political, ethnic, social, religious and business leaders should answer what is this if not apartheid. Though they know this sicken and awful press release demand, being silent, and not condemning openly is certainly concerting to it and it'sahistorical liability on all Burmese leaders. If in future, if there're any similar occurrences, conquering the houses and businesses of different ethnic and religious minorities, how are the Burmese political leaders going to handle this issue?
Leaders should learn from the lessons of Bosnia, Rwanda and alike. Prevent before it get worse. Get the country on the right path. The democracy-skinned quasi-civilian government who's trying to get their head up again should try to work hard for national reconciliation in truth manner.
Posted: 29 Jun 2012 08:08 AM PDT
Posted: 29 Jun 2012 01:48 AM PDT
Ahmad Phesal: DBKL isn't solely responsible for handling traffic woes in the city. There are too many highways leading into the city, which brings in the traffic. In Vancouver, Canada, all the highways are built outside of the city, so we need to see the connectivity of all the links.
Posted: 29 Jun 2012 01:37 AM PDT
Posted: 29 Jun 2012 04:30 AM PDT
Posted: 29 Jun 2012 01:27 AM PDT
Great news! March 20 has been declared as International Day of Happiness.
According to The Star, quoting the Bernama News Agency, the special day was adopted by consensus by the 193-member General Assembly of the United Nations.
"The pursuit of happiness isafundamental human goal," the resolution said.
PET+BLOGSPOT is the ONLINE BLOG of the Malaysian Animal-Assisted
Posted: 29 Jun 2012 12:50 AM PDT
There's no justice for abused animals, say welfare groups
PETALING JAYA: Animal welfare groups and pet owners have
expressed disappointment over the current laws against animal abuse,
saying that these are insufficient and should be changed.
Referring to the RM6,000 in total fines imposed on Petknode owners in court yesterday, Malaysian Animal Welfare
ဦးကျော်ကျော်အောင်။ ။"အရှင်ဘုရား… အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုဆရာတော့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုများ သုံးသပ်ပါသလဲဘုရား၊ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အထိ ကြီးထွားလာရသလဲ ဆိုတာ ပြောပြပါဘုရား"။ဦးပညာစာရ။ ။ "ထိန်းသင့်ထိန်းထိုက်တဲ့အချိန်မှာ လိုက်မထိန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပ်နဲ့ ထွင်ရမယ့်ကိစ္စကို
အဲဒါတောင်ကုတ်ပြဿနာပေါ်လာတဲ့အခါမကျေနပ်တဲ့အုပ်စုက နောက်တမျိုးဖြစ်လာတယ်။ အားတင်နိုင်တဲ့အုပ်စုက နောက်တမျိုးဖြစ်လာတယ်။
အဲဒီမှာ NLD ဒေါ်စုတို့ ပါတီ..အဲဒီပါတီကတာဝန်ကို…ဒေသလူထုအသိဉာဏ်ကို အကဲမခတ်ဘဲနဲ့ကမ္ဘာ့လမ်းကြောင်းကပြောလိုက်တာလည်း တဖက်ကို အားပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဒေါ်စုပြောတာကိုကြားလိုက်တယ်၊" လူနည်းစုကို လူများစု အနိုင်ကျင့်တာ မကောင်းဘူး။လူများစုဟာ လူနည်းစုကို ညှာတာရမယ်၊" အဲဒီစကားဟာ ကမ္ဘာ့ လမ်းကြောင်းမှာတော့ကောင်းတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေသထိန်းသိမ်းရေးလမ်းကြောင်းမှာကျရင် အဲဒီစကားဟာ တဖက်သားကို အားပေးသလိုဖြစ်သွားတဲ့
အတွက်ကြောင့် မောင်တောဘက်က ထကြွလာတယ်။ မောင်တောဘက်က အခြေအနေကိုမြင်တဲ့အခါတပြည်လုံး
ပါသွားတာပဲ။ မောင်တောဘက်ကအခြေအနေကိုမြင်တဲ့အခါတပြည်လုံးက အဲဒီသတင်းကိုသိတဲ့အခါ တမျိုးလုံး
တပြည်လုံးမခံနိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ဒီလောက်ပွသွားတာပဲ။ အဲသည်တော့ပထမဆုံးအပ်နဲ့ထွင်ရမယ့် ကိစ္စမှာ
လိုက်လို့ ထိန်းသိမ်းလိုက်နိုင်လို့ ရှိရင် အဲဒီပြဿနာ အဲလောက်မကြီးနိုင်ဘူးလို့တော့ထင်မိတယ်။"
ဦးကျော်ကျော်အောင်။ ။ "တင်ပါဘုရား။ အခုအခြေအနေအရပေါ့လေ။ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ဒီပြဿနာ ကို
အမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်သွားအောင် ဘာတွေများလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ အရှင်ဘုရားမြင်မိပါသလဲဘုရား။"
ဦးပညာစာရ။ ။ "ခဏလေးနဲ့ ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့်ကိစ္စလို့ တော့ မမြင်ဘူး။
ခဏလေးနဲ့ ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အခုလို ကာဖျူးတွေထုတ်ထားလိုက်၊ အဲဒီထုတ်ထားတဲ့အခါ ငြိမ်သွားအောင်
တနည်းမဟုတ်တနည်း စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရမငြိမ်ပေမယ့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်းလိုက်ရမယ်။ အဲဒီဟာတော့ ငြိမ်သွားမှာပဲ။
ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ကြားမှာ ပြဿနာကို ငြိမ်အောင်ပြောတာပဲ။ ကိုယ့်ဘက်ကို ကိုယ်ဆွဲလို့ ပြောမယ်၊
သူ့ ဘက်ကို သူဆွဲလို့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာက နောက်တမျိုးအဖြေထွက်လာမယ်။ ဒီလိုထိန်းသိမ်းထားတာပဲ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ကောင်းတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ပြဿနာကြီးထွားမှုအားနည်းမယ်။
တကယ် တာရှည်မှာငြိမ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ခါ ဒီထက်မက စနစ်တွေ၊ မူတွေနဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးပြီးတော့ ချပေးရမယ်၊ လုပ်ပေးရမယ်။
အခုအအခြေအနေမှာ ဟိုဘက်ကRSO( Rohingya Solidarity Organization (RSO)= ရိုဟင်ဂျာသွေးစည်းညီညွတ်ရေး စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ )က လူသေတာကို အရေးစိုက်တာမဟုတ်ဘူး။
ဒေသတခုကို သူတို့ အာဏာလက်ထဲသို့၊ သူတို့ လက်ထဲသို့အာဏာပိုင်ဖြစ်အောင်၊ သူတို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒေသတခုဖြစ်အောင် သူတို့ က ကစားနေတဲ့အကွက်တွေပါလာလို့ ရှိရင် နိုင်ငံတကာက ဝင်လာမယ်၊ အစ္စလမ်နိုင်ငံပေါင်း ၄ဝ ကျော်လောက်က ဝင်လာမယ်၊ ကုလသမဂ္ဂဝင်လာမယ်၊ အမေရိကားကသူတို့ ဟာသူတို့ဝင်လာမယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် သူတို့ ကို ငါတို့ ဒေသကမောင်တောနယ်ကို ခွဲထုတ်ပေးရမယ့်အဆင့်မျိုး ဖြစ်လာမယ်။
အဲဒီကဒေသခံတွေဟာ သမိုင်းကြောင်းအရ ရခိုင်မှာနေခဲ့ပေမယ့်ဒီနေ့ အသစ်ဝင်လာတဲ့လူမှသာ ကမ္ဘာ့အခြေအနေကြောင့် သူတို့ နေရာရသွားပြီးရင် နှစ်ပေါင်းလေးငါးခြောက်ထောင်လောက်ကပင် နေလာတဲ့ရခိုင်တွေဟာ ဗမာလည်းမဟုတ်ဘူး၊
ကုလားလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ကြားမှာ ရခိုင်တွေဟာ အနေကြပ်သွားပြီး နေရာပျောက်သွားမယ့် အခြေအနေသို့ ရောက်သွားမယ်၊
ဒါကြောင့် အဲဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် ကုလားသက်သက်ကိုဖြေရှင်းလို့ မရဘူး၊ ရခိုင်သက်သက်ကိုဖြေရှင်းလို့ မရဘူး၊ ကုလားရခိုင်သမိုင်းကြောင်းအရ ဒီအထဲမှာ အခွင့်အရေး ဘယ်သူ့ ကို ဘယ်လောက်ပေးသင့်တယ်၊ အဲဒီလိုမပေးလို့ ရှိရင် ရခိုင်ဟာ ဒီအတိုင်း ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီကပြဿနာဟာ ဒီထက်ကြီးထွားဦးမယ်။ ဒီနေ့ အခြေအနေမှာ ဒီနေ့ ပုံစံမျိုး ငြိမ်အောင်လို့ကာဖျူးထုတ်လို့ထိန်းသိမ်းထားတာ ကောင်းတယ်။ တာရှည်ငြိမ်သွားဖို့ အတွက်တော့ သမိုင်းကြောင်းအရရှိခဲ့တဲ့ လူတွေကို ဘယ်လောက်အခွင့်အရေးပေးရမယ်၊ ဧည့်သည်ရောက်လာတဲ့သူတွေကို လူသားချင်းကိုယ်ချင်းစာနာပြီး ဘယ်လောက်အထိအခွင့်အရေးပေးသင့်တယ်၊ အဲဒီဟာကို စနစ်တကျ လုပ်ပေးရမယ်။ အစိုးရကလုပ်ပေးသလို ပါတီကြီးတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ နိုင်ငံရေးကို ဝါသနာပါတဲ့သူတွေ ၊ဒီမိုကရေစီကို ဝါသနာပါတဲ့သူတွေဟာ ဒီဟာလုပ်ရမယ်။"
ဦးကျော်ကျော်အောင်။ ။ "အရှင်ဘုရားခုနကအမိန့် ရှိသွားတဲ့အတိုင်းဆိုရင် ရောက်လာတဲ့ဧည့်လူမျိုး၊ ဧည့်သည်တွေ
အပေါ်မှာ အခွင့်အရေးပေးဖို့ လိုတယ်လို့ ထင်ပါသလား။"
ဦးပညာစာရ။ ။ "လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင့်အတင့်တော့ပေးရမယ်။ အသင့်အတင့်မပေးနိုင်လို့ ရှိရင် ရခိုင်ဒေသမှာ ဒေါ်စုပြောသလို ၊ နောက်လူတွေပြောသလို ၊ လူသားကို လူသားလို့ မြင်တဲ့သူတွေပြောသလို ဆိုရင် ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့လူဦးရေနဲ့ သူတို့ နဲ့ မမျှတတဲ့အတွက်ကြောင့် (ငါတို့ )အသက်သေဆုံးအောင်သတ်လိုက်ရမှာလား၊
ဘယ်သူသတ်နိုင်မလဲ၊ ကမ္ဘာ့ကလက်ခံမှာလား၊ အဲဒီကိစ္စ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နောက်တခုက ဒီနိုင်ငံမှာ မနေနဲ့ လို့(ငါတို့ )
နှင်ထုတ်မှာလား၊ ဦးနေဝင်းလက်ထက်က ဟင်္သာစီမံချက်နဲ့ ၊ နဂါးမင်းစီမံချက်တွေနဲ့ နှင်ထုတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်မအောင်မြင်ဘူး၊ အဲဒီကိစ္စလဲ ကမ္ဘာကလက်ခံနိုင်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလိုဆိုရင် ဒီဒေသမှာပဲသက်သက်ထားမှာလား။ မဟုတ်လို့ ရှိရင်
ပြည်ထောင်စုတခုလုံးမှာ လူသားကိုလူလို့ မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီနေရာမှာ အလွန်အကျွံများနေတယ်၊
သူတို့ ကလည်း သွားချင်နေတယ်၊ ဒါကြောင့်ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးကို ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ၊ အဲဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာ မန္တလေးတို့ ၊ စစ်ကိုင်းတို့ ၊ မကွေးတို့ ၊ နောက်နေရာ- နောက်နေရာကိုလည်း ပြန့် နှံ့ ပြီးရင် ပြည်ထောင်စုထဲမှာ သူတို့ စိမ့်ဝင်သွားပြီးရင် အင်အားဟာတစုတပေါင်းတည်းမဟုတ်ဘဲ အင်အား ပြန့် နှံ့ သွားလို့ ရှိရင် မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ လက်ခံလိုက်ပါ။ အဲဒီလိုဆိုလို့ ရှိရင် သူတို့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အနှံ့ ပြန့် နှံ့ သွားလို့ ရှိရင် လူသားကိုလူသားလို့ မြင်တဲ့ထိန်းသိမ်းမှုတခုဖြစ်လို့ 
ဒီဒေသမှာလည်း အင်အားလျော့ဆင်းသွားပြီးရင်၊ အင်အားနည်းသွားပြီးရင် ရခိုင်ဒေသလည်း ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်လို့ တော့ ထင်တယ်။ "
ဦးကျော်ကျော်အောင်။ ။ "အရှင်ဘုရားအမိန့် ရှိသလို ပေါ့လေ၊ တခြားဒေသတွေကိုပါ ပျံ့ နှံ့ သွားအောင်
ရောက်ရှိသွားအောင်၊ ပျံ့နှံ့သွားအောင်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒမျိုးကိုအစိုးရက မလုပ်ဆောင်ဘူးဆိုလို့ ရှိရင်
ဦးပညာစာရ။ ။ "အဲဒီကိစ္စဟာ စမ်းချောင်းက ရေထွက်လာတယ်၊ ဆည်မြောင်းတာတမံဆည်လိုက်တယ်၊ စမ်းချောင်းကထွက်တာကိုလည်း မပိတ်ပေးဘူး၊ မိုးရွာတဲ့ရေကိုလည်း အဲဒီပေါ်မကျအောင် အမိုးမိုးမပေးဘူး။
ရှေ့ ကိုလည်း ရေမသွားရဘူးဆိုပြီး တာတမံဆည်လိုက်တဲ့အခြေအနေဟာ ရခိုင်ပျက်ပါစေလို့ လုပ်တာနဲ့ အတူတူပဲ။
အဲဒီကိစ္စမှာ ရခိုင်ဟာ ထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ပင်ရင်းအိမ်ရှင်က ဘယ်သူလဲ။ ဧည့်အာဂန္တုက ဘယ်သူလဲ။အဲဒီဟာကို အစိုးရက ခွဲရမယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ခွဲရမယ်၊ ပါတီတွေက ခွဲရမယ်။ "
ဦးကျော်ကျော်အောင်။ ။ "ဆရာတော် ဦးပညာစာရကို RFA ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။"
ဦးပညာစာရ။ ။ "ကောင်းပါပြီ၊ ငါတို့ လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"
"We call on Najib to apologise over the call by two Umno MPs to have Bersih co-chairperson tried and hanged," Bersih 2.0 steering committee said inastatement.
Besides Mohamad, Lenggong MP Shamsul Anuar Nasarah also supported the suggestion to hang Ambiga for the "treasonous" act of organising the April 28 Bersih rally for free and fair elections.
The statement noted that Najib and BN chief whip Nazri Aziz were keeping quiet about taking disciplinary action against the duo, adding this meant "BN isahabitually violent party".
The steering committee said Najib's inaction and the "witch-hunt campaign against Bersih 2.0 leaders" had given the impression that Najib isa"false democrat".
The term "false democrat" was coined by Canadian journalist Mark MacKinnon on Sunday in an article entitled "A Roster of the Modern Democrats" published in The Globe and Mail.
Yesterday, BN secretary-general and Putrajaya MP Tengku Adnan Mansor said Mohamad's statement was his personal opinion and did not reflect the ruling coalition's stand.
But the Bersih committee rejected Adnan's statement, saying:
"No self-respecting prime minister would… expect to disown his coalition's responsibility with an excuse that it was the personal opinion [of the MP]."
"… if the statement I made had hurt my Indian friends, the MIC or PPP. If it hurts my colleagues in BN, and affects our spirit of understanding, then I retract what I said…" he said.
But the committee brushed off Mohamad's retraction, saying "it shows his thinly veiled arrogance despite the nationwide outcry [against his remark]".
"Mohamad did not even bother to apologise to Ambiga, Bersih and 250,000 Malaysians who went to the street on April 28 for electoral reform.
"And Shamsul did not even withdraw his support for Mohamad's statement." -FMT
Posted: 28 Jun 2012 10:53 PM PDT
Posted: 28 Jun 2012 08:52 PM PDT
Posted: 28 Jun 2012 08:42 PM PDT
Posted: 28 Jun 2012 06:01 PM PDT
Posted: 28 Jun 2012 11:13 PM PDT
"Daniyar berada di Sandhurst sekarang. Mereka menerimanya tahun lepas," kata sumber kepada The Malaysian Insider.
Menurut laman web kolej tersebut, Akademi Ketenteraan Diraja Sandhurst di Surrey adalah dimana "semua pegawai Tentera British dilatih dan bertanggungjawab memimpin tentera."
"Lebih 80 peratus Pegawai Kadet adalah penuntut lepasan universiti, namun sebahagiannya dengan A-Level dan yang setaraf. Yang lainnya adalah tentera yang berkhidmat dan dipilih untuk menjalani latikan Pegawai dan ada dari luar negara, dipilih oleh tentera sendiri untuk berlatih di akademi terkenal dunia.
"Tidak mustahil untuk mana-mana pihak menjalani latihan menggunakan duit mereka sendiri," kata laman web tersebut.
"Saya tidak pernah bertengkar dengan suami saya," kata Maira Nazarbayev kepada New York Post dalam satu temu ramah yang disiarkan Jumaat lalu.
"Saya menganggap kami masih berkahwin dan mempunyai hubungan yang baik dengan suami saya. Dan saya tidak pernah melihat dokumen berkaitan perceraian. Saya tidak pernah menandatangani sebarang dokumen," tambahnya.
Namun, New York Post memetik dokumen mahkamah yang difailkan Bolat Nazarbayez di New York, menuduh Daniyar menipunya sejumlah US$20 juta (RM63 juta) rumah kondominium di Wall Street disamping memasuki universiti terbaik melalu "penipuan" kertas kelayakan daripada sekolah tinggi di Kazakhtan yang tidak dimasukinya.
Pemimpin BN berkata kepada The Malaysian Insider awal minggu ini ia hanyalah "isu peribadi" dan tidak menjejaskan reputasi presiden Umno itu.
"Maira Nazarbayev, yang menetap diala Imelda Marcos, dikaitkan dengan mafia Rusia," kata akhbar berkenaan yang disiarkan pada4Ogos, 2011.
Maira dalam satu kenyataan juga menegaskan keluarganya telah merancang untuk bercuti di Eropah beberapa minggu lagi dan beliau akan " memperuntukkan masa berharga itu dengan keluarganya dan yang tersayang." -TMI